Trademark Registration in Zimbabwe : IGen Trademarkers
We have competent Trademark Attorneys who will guide and assist you to Register Trademark in Zimbabwe.
We will conduct Search and provide you with comprehensive Search Report, which will give you the probability of your trademark registration in Zimbabwe. Send us your trademark for preliminary Search in Zimbabwe.
Our Trademark Attorney, will check whether the trademark to be registered is entitled for protection in Zimbabwe. Once the Trademark is checked, the competent Trademark Attorney, will then File and prosecute the Trademark applications at the Zimbabwe Intellectual Property Office
We will require the following information and documents to regester trademark in Zimbabwe;
Zimbabwe follows the International Classification of Goods, Multiclass application is not allowed, different applications must be filed for each class of the trademark if the Trademark is to be registered in more than one class;
Once filed, examined and accepted the Trademark application shall be published and the opposition period is within three (3) months following publication.